Jijjiirran hundi hin kuusaman. Fakkeenyaaf, jijjiirruun taabii dhabi bitaatti hiriirsuu irraa gara mirgatti hiriirsuu hin kuusamu. Hata`u malee, jijjiirraaan baratamaa akeekkoo dubbisaan hojjetame hundi kan akka ida`ama, haqamaa, fooyyessa barruu, fi dhaangessuu baratamaa proofreaderiin ni kuusamu.
Ammantana gocha jijjiirraaa jalqabi. Kan beekuu qabdu barruun dubbisootaa haaraan hundi kan ati saagdu halluudhaan jalamuramu, haata`umalee barruun hundi kan ati haqxe ni mul`atu garuu cufamuun halluudhaan agarsiisamu.
Osoo akeektuu hantuuteen gara mallattoo jijjiirrati siiqxe, akaakuu jijjiirraaf, barreessaaf, guyyaa fi sa`atii kan guyyaaf jijjiirraa qaccee gargaarsaa keessaa wabii ni agarta. Osoo qajeelchi baay`atee ammas dandeessifame, jijjiirraa kana irraa yaadota kamiyyuu argaman ilaaluu ni dandeessa.
Jijjiirran galmee wardii keessatti man'eewwan handaara maddiitiin shoolamu; yeroo man`eetti tuqxu jijjiirama kana irraa Qaccee Gargaarsaa keessaa oddeeffannoo caalu gadi faggeenyaan argita.
Galmee barruu keessaa, sararoota hunda dabalataan mallatteessuu hallaawwuu jijjiirte Shoola gochuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf,kun muudana keessatti unka sarara diimaa ni ta`a.
Title is: Jijjiirraa Kuusuu